Aripi iwo mazano atakadzivirira? (Pfungwa) | Linux Vakapindwa muropa
Pablinux, David Naranjo neni hatizivane. Tine mazera akasiyana, isu tinogara munyika dzakasiyana uye, Kunze kwekushandisa Linux, isu pamwe hatina zvakawanda zvakafanana.
Pasina kubvumirana, isu vatatu takafunga kunyora nezve misoro ine chekuita nesocial media resolution yekurambidza Donald Trump nevamwe vevatsigiri vake.David akasarudza kutsanangura zviitiko pasina kuwedzera chirevo. Pablinux akaita kurudziro yekuzeza chishandiso chekudzvinyirira, uye ndakabuda nekepisi pane kuwedzera kwezvematongerwo enyika kweMozilla Foundation.
Kunze kwekurohwa mbama pachiwoko kubva kumuverengi anomupomera kusanzwisisika kwenhoroondo, David haana kukonzera nharo huru. Chikamu chakanyanya kutakurwa naPablinux. Vaverengi vakati wandei vakanyunyuta kwaari nekusajekesa mabviro emusiki uye mumwe akatsigira kuti dambudziko raive rekuzoshandiswa.
Yakanga isina kunyanyoipa kwandiri. (Zvirinani ivo havana kundipomera kuti ndine musoro wakashata senge muMenameame) Vakandibata semusina hanya nemurume, maziso uye mutsigiri waVox (Hupenyu hwangu hunotaura zvakajeka kuti ndinogara kuArgentina) Mumwe muverengi akataura kuti kudzvinyirira inyaya yedhigirii.
1 Zvimwe zvinhu pamusoro pangu kupfuura zvavaida kuziva
2 Kwanga kuri kupi misimboti yatakadzivirira?
Zvimwe zvinhu pamusoro pangu kupfuura zvavaida kuziva
Kusiyana nevazhinji vevaverengi vedu, Ndakagara muhudzvanyiriri. Uyo akatonga Argentina pakati pa1976 na1983. Ini handina vamwe vandinoziva vanyangarika, asi, pakati pezviyeuchidzo zvehudiki hwangu ndezve amai vangu vakaburitsa mabhuku muraibhurari vachipa baba vangu kuti vapise uku ndichiyambira ini nemukoma wangu kuti tisataure chero chinhu.
Gore rakatevera kwakauya Hondo yeMalvinas chuku takaenda kubva mukunzwa mune ese midhiya kuti isu taikunda kunhau dzekuzvipira.
Muna 1984 Buenos Aires akabata yekutanga International Book Fair mu democracy. Pikicha yemapepanhau ese yaive elektroniki katarogu kwayakaratidzwa munzvimbo dzinotenga mabhuku aMarx
Ah, masheni haana kungonetswa nemabhuku nemafirimu. Mune rimwe dunhu kudzidziswa kweMathematics Yemazuva Ano kwakarambidzwa. Zvinotaridza kuti seti dzidziso yaive yekumukira.
Makore ese aya emabhuku asina kuverengwa, maonero asina kukwikwidzwa uye zvinhu zvisina kudzidziswa zvinonyanya kukonzera kuparara kwehutungamiriri hweArgentina uye semhedzisiro yenyika. Saka Ndine urombo kana ndisina chokwadi nezvekudzivirira kwakanaka uye kwakaipa kudzvinyirira.
Kwanga kuri kupi misimboti yatakadzivirira?
Kuisa parutivi rangu (ini ndinobvuma) hapana chinonakidza nhoroondo yehupenyu. Kurambidzwa kwaTrump uye kubviswa kwemakwikwi akaedza kuigamuchira kunogadzira zviitiko zvine njodzi.
Ko kana Biden ikasapa Amazon kudzosera chibvumirano chePentagon chakatorwa naTrump kwaari? Ko kana vagovani vepa Twitter vakaneta nekusaita purofiti kuitengesa kuna Murdoch, muridzi weFox News, uye kurambidzwa munzira yakatarisana kunotanga?
Pamusoro penyaya iripedyo rakapihwa iyo Electronic Frontier Foundation. Sezvo wese munhu achiziva, ine ine equestrian chifananidzo cheSantiago Abascal pamuzinda wayo.
Kufanana nevanhu vazhinji muUnited States nepasirese, EFF inoshamisika uye inosemeswa nekurwiswa nechisimba kweChitatu kuUnited States Capitol. Isu tinotsigira vese vanoshanda kuti vadzivirire Bumbiro nemitemo, uye tinotenda nebasa rezvematongerwo enyika, vashandi nevamwe vashandi. avo vakatsungirira maawa mazhinji ekusungwa uye vakasangana kuzadzikisa basa ravo rebumbiro.
Sarudzo yeTwitter, Facebook, Instagram, Snapchat, nevamwe kumisa uye / kana kuvharidzira nhaurirano dzaVaTrump kuburikidza nemapuratifomu kwavo kuri nyore kushandisa kodzero dzavo, pasi peChinamuro Chekutanga uye Chikamu 230, kuti vatore nzvimbo dzavo. Tinotsigira kodzero idzodzo. Nekudaro, isu tinogara tine hanya kana mapuratifomu achitora chinzvimbo chevanoongorora., saka tinoramba tichikukumbira kuti ushandise hurongwa hwekodzero dzevanhu kune izvo zvisarudzo. Isu tinoonawo izvozvo iwo mapuratifomu mamwechete akasarudza, kwemakore, kupa vamwe vatauri - kunyanya vakuru vehurumende - pamusoro pevamwe, kwete muUnited States chete, asiwo mune dzimwe nyika. Ipuratifomu haifanire kuisa seti yemitemo kune vazhinji vashandisi vayo, uye wozoshandisa yakasarudzika seti yemitemo kune vezvematongerwo enyika nevatungamiriri venyika vatove nesimba rakakura.. Zvakare, ivo vanofanirwa kungoita zvine hungwaru kana zvasvika pakubvisa zvemukati kubva kune vashandisiwo zvavo sezvavave kudanana zvine ruremekedzo kune vatungamiriri venyika. Kuenda kumberi, isu zvakare tinokumbira mapuratifomu kuti ave akajeka uye akaomarara munzira yavanoshandisa mitemo yavo, uye Tinokumbira vagadziri vemitemo kuti vawane nzira dzekukurudzira makwikwi kuitira kuti vashandisi vawane akawanda edhisheni uye sarudzo sarudzo dzavanosarudza kubva
Ndiwo mweya wandinoratidzira dzimwe nzira uye kupokana nekudzvinyirira. Iyo yekutanga 4 rusununguko rweMahara Software chero nguva inogadza ideological kurambidzwa. Chirongwa chishandiso icho, sando, hachina kunaka kana kushata. Ndeavo vanoishandisa vanozvisarudzira.
Ini ndinopedzisira ndave nerimwe zuva. Nhetembo yaMartin Niemöller inozivikanwa kwazvo panguva yekudzokera kune democracy muArgentina.
Kutanga vakauya vachitsvaga makomunisti uye ini handina chandakataura nekuti ini ndaive ndisiri mukomunisti.
Ipapo vakauya nekuda kwemaJuda uye ini handina kutaura nekuti ini ndaive ndisiri muJuda.
Vakabva vauya vema trade unionists uye ini handina chandakataura nekuti ini ndaive ndisiri mushandi wemubatanidzwa.
Gare gare vakauya kumaCatholic uye ini handina chandakataura nekuti ini ndaive muPurotesitendi.
Pakupedzisira vakauya kwandiri asi, panguva iyoyo, pakanga pasina kana mumwe akasara kuti ataure chero chinhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Kwanga kuri kupi misimboti yatakadzivirira? (Pfungwa)
Ini handiwanzo kunyora zvirevo pane ino blog kana pane chero imwe - ini ndine husimbe kwazvo - asi panguva ino zvaiita kunge zvakakosha kuita kudaro kupa rutsigiro rwangu kune vapepeti veLinuxadictos.
Tiri panguva iyo dzidziso yemagariro - kunyanya paInternet - yadzikira kusvika padanho rekuti kutaura chokwadi chakapotsa chave chiito cheushingi.
Ini ndinofunga kuti, sezvazvinowanzoitika, kune vazhinji vedu vanogutsikana kuverenga svikiro seizvi, iro rakakomba zvakakwana kuti, kune rumwe rutivi, rondedzere zvinangwa pachinzvimbo chekuchengetedza kusasarura uye, kune rimwe divi, - kana zvasvika - aripo mapoinzi ekuona uye maonero anoenderana neicho chaicho data uye masosi Zvisinei (uye zvinosuwisa), avo vanotsvaga kutsoropodza vasina hwaro uye vanoshora avo vanotenda kuti havafunge savo vanogara vaine kurudziro kana zvasvika pakurwisa noutsinye kupfuura vamwe vedu pazvinosvika pakudzivirira zvakanaka.
Ziva kuti iwe une pano muverengi wevazhinji vakanyarara vanokutsigira.
* Hapana chakakanganisika nekuita kushoropodza kana zvidimbu zvemafungiro, zvisinei zvingave zvinopesana (chero bedzi zvakaumbwa mukati mehurongwa hwekodzero dzakakosha). Izvo zvakadzikira zviri kuunza maonero sezvazviri uye / kana vachiziva vachishandisa nharo dzisina musoro.
Ini handisi munyori wenyaya ino, asi, semunyori weimwewo, ndinokutendai. Zvinoita sezvisingadaviriki kuti kudzivirira rusununguko rwekutaura uye kufunga kwakasununguka nhasi sosi yekurwisa nevamwe. Ini ndinoona iyo poindi yatiri kusvika iri kusuruvara kwazvo, asi ini ndinofara kuverenga mhinduro dzakadai.
Ndinobvumirana. Nekudaro, munzvimbo yangu ini ndaizoda kuti panzvimbo pekuisa vese vashandisi vepuratifomu kune iwo iwo mirawo uye mamiriro ekushandisa, kuti kuti usarudze maficha matsva epuratifomu mushandisi anofanira kubvuma mamiriro ekushandisa (es izvo ndiyo, marongero ayo nguva nenguva anochinja zvinoenderana neiyo idiosyncrasy yeMukuru (Chaizvoizvo)), kuitira kuti avo vanozviisa kumafirita e "zvematongerwo enyika akarongeka" uye zvimwe zvikumbiro nekuda kweanobvumidza (vangave bhizinesi, vezvokutengeserana, vezvematongerwo enyika, pakati pevamwe ) ndevaya vanotambura mhedzisiro yekutambira iwo marongero matsva, kune rimwe divi, chero anomanikidza HAPANA, vabvumire kuti varambe vachishandisa chikuva, vachichinjanisa nazvino tekinoroji zviyero asi vasina kunakidzwa neazvino mapuratifomu maficha. Nenzira iyi paizove nezvibvumirano zvakasiyana zvevanhu, avo vaizobatwa zvakasiyana, semuenzaniso, FB's marongero aisamanikidza semakore gumi apfuura, kunyangwe aesthetically achienzaniswa nevashandi vayo varipo makore gumi apfuura zvakashata, vangave zvibayiro zvidiki asi izvo zvaisazotungamira ku:
1 Kutyora chivakwa chekambani iyo inopa yepamhepo sevhisi.
2 Kurambidzwa pane izvo zvinoburitswa kwaizosiyana zvichienderana nezvibvumirano zvinogamuchirwa nevashandisi.
3 Vashandisi vekare vangave nemukana wekusarudza marongero ekushandisa angave anonyanya kubatsira (kudzikisira).
Izvi semuenzaniso, asi ini ndaigara ndichivenga chokwadi chekuti ini ndaive hongu kana hongu ndinogamuchira mitsva iyi pasina kusarudzika, sekunge kambani yakatsaurirwa kushumiro yemasocial network yanga isina kubatsirwa neruzivo rwakapihwa neyekare mushandisi marongero. Uye sekuzvinzwisisa kwandinoita, kana iwe uchida kuita kuti makambani aone kana vanhu vachibvumirana kana kwete nemaitiro avo matsva, zvingave zvakakwana nemaitiro evashandisi vanosarudza iwo apfuura uye vangani vanodzikisira kuitira kuti vaone kana vachichengetedza ivo kana ivo vakaraswa asi vachichengeta maficha matsva. Ini ndinonzwisisa kuti pachirongwa uye padanho repaseva zvingave zvakaoma (kana zvinonetsa), asi kwete kupfuura pasati pasvika HTML5 pakanga paine saiti yekuonekwa pane desktop uye imwe kuti ionekwe kubva kumafoni efoni, ayo anodikanwa zvakasiyana Kuchengetedza aesthetics (template) ndiko kuremekedzwa kusingabvumirwe kune izvo mushandisi anoda kugamuchira semamiriro ekushandisa uye kubvumidza kudzoka kuchirongwa chekare.
Ndatenda nekutaura kwako. Mupiro wako unonakidza kwazvo.
Kuita zvakanaka akadaro
Kana iwe ukasaita chero chakaipa, usazvidya moyo kuti hapana chavachaongorora, nekuda kwaTrump, vanhu vakafa, saka ini ndinoona zvakakwana kuti vanochengeta maakaundi avo ese kuitira kuti vagone kuramba vachikurudzira ruvengo. Kana iwe usingabvumirani nazvo, saka une dambudziko rakakomba. Nekuti kamwe chete pasocial network vanoita chinhu zvakanaka, pamusoro pazvo tinoenda tinovatsoropodza, nekuti ndinovaombera uye ndinotora ngowani yangu kuenda kuchiratidzo cheTwitter nemamwe manetwork kuTrump.
Uye ndiani anosarudza kana zvandakaita zvakaipa?
Damn male, ko icho jira newewo, wakandiita kuti ndinzwe kunyara nevamwe. Zvakanaka, ndiani achazosarudza? Pfungwa, pfungwa, muridzi (s) enetiweki yekutandarira, nezvimwe, tichaongorora Trump uye hazvina kunaka, apo, ini ndinodzokorora zvakare, vanhu vakafa nekuda kwemurume uyu uye Unoratidzika kunge unozvidzivirira, nechikonzero cheLinux, jira rakadii ... Uye kunze kwenetiweki inosarudza chakarurama kana chisiri, iko kururamisira nevatongi uye kunonzi hupenyu chaihwo, ibva ...
Mafungiro uye njere zvinowirirana.
Ndanga ndichitaura nezveRuramisiro kubva pakutanga.
Chinyorwa chakanaka. Zvinonzwisisika kuti mhirizhonga meseji meseji, nezvimwe zvinodzorwa.
Zvinonzwisisika zvakare kuti varidzi vechigadzirwa vanogona kubvumira kana kusashandisa chigadzirwa chavo kune chero wavanoda. Uye pasocial network, zvinosuwisa, vane varidzi.
Ndosaka mablog uye mapeji senge ako akasununguka ekudzivirira, kwaunodhinda ako mazano, aripo kune chero munhu anoda kuaverenga. Uye uyo asingadaro.
Kwaziso kubva kuCórdoba (Spain)
Rusununguko rwangu runopera panotangira rusununguko rweumwe munhu.
Yakanyatsoratidzwa. Kujekesa zvisina hwaro kunogara kwakashata. Ini ndinonzwisisa kuti ruregerero rwechisimba, ruvengo, kana kushungurudzwa runofanira kuongororwa. Asi maratidziro haakwanise kuve imba yekurima yemamwe mafungire, uye zvinozoitika kuti mune dzimwe nzira ivo vari.
Dambudziko rekutanga nderekuti ese aya mapuratifomu ekudanana anodzorwa neveZionist, uye vane zvinangwa zvakajeka uye vari kuzoongorora pasina chero hwaro kunze kwevavanofarira. Ndosaka ndiri kusazeza kuve mumhando iyi yemambure, ini ndinongoti "handivade" asi ini handisi kuzokushungurudza nezvandinofarira zvakare.
Dambudziko repiri nderekuti Einstein (ndinofunga zvaive) aive akarurama paakati "ndinotya zuva iro tekinoroji ichatora hunhu hwedu; nyika ichange iine chizvarwa chemapenzi chete ”… ndakagara ndichifunga kuti chirevo chemunhu mukuru chinongoedzwa kutsanangurwa nemuratidziri, nekuti vane hunyanzvi hwekutaura zvakawanda mumutsara mumwe chete. Saka ndinofunga mazwi haana basa.
Ini ndinogona kupa zvishoma kune zvako zvinyorwa nekuti ini handina kuverenga izvo zvinyorwa zvaunotora. Chinhu chega ndechekuti zvaizogadzirisa kupereterwa kwemusoro zita.
Ini ndaifanira kuzvitarisa
Pasina kupokana ichiri rairo yakanaka
Tsananguro zhinji dzisina basa; Kana mumwe munhu achishatirwa nehutsinye hwakadai senge yakaitika nekudyidzana pakati pevazhinji disinformation media uye damn big tech, nyowani KGB, Gestapo nemapurisa eCCP pamwe chete, imhaka yekuti iye anonyengera, chero munhu anofara nezve kubiwa kwesarudzo uye pamusoro pekuzvidzivirira kwekodzero dzevavhoti uye woedzesera kusimudzira rusununguko rwe linux uye unogona kuenda kunogeza mhino dzako zvakanyanya kana chimwewo chinhu.
Ndiro dambudziko, padiki nepadiki, patsika nemagariro isu tinoshomeka, chero rumwe rudzi rwezvitendero kana kutendiswa kwedu ndezvechokwadi vavengi kana zvekumwe kunyanyisa ... Izvo zvese zvakatanga apo kuenzana zvishoma nezvishoma kurasikirwa kwakakurumbira kuchitsigira zvido zvevashoma uye kana isu tichiwedzera kune izvo kusava nehanya kune avo vanopfuura uye vanogara zviuru zvevanhu mukona dzese dzepasi.
Chinhu chinonyanya kundinetsa ndechekuti mazana anozviti inhengo dzemamwe mafambiro / misimboti asi kana vaongorori vakaona kuti mukuita kwavo vanozvipikisa kana kusaremekedza zvavanoti vanosimudzira / vanomiririra.
Hapana tariro akadaro
Chimwe chezvinhu zvakaipisisa zvatinoita kuremekedza maonero, kuitirana nharo uye kubvuma kuti dzimwe nguva hatina kunaka, sekumwe dzimwe nguva, pamwe zvishoma, isu takarurama. Isu takazvarwa takashata uye hupenzi hwedu hwevanhu chimwe chipingamupinyi kufambira mberi mune izvi.
Zvinonyadzisa kune vamwe kuti vaone kuti mamwe mabhureti anokuisa sei zita rekuti fascist kana maBolshevik zvinoenderana nekuti vakanzwisisa sei mazwi mashoma avakakuverengera, kana ekungoona musoro wenyaya yako, uchifunga kuti nyika yese inokwana nharaunda yavo uye izvo zvinongowanikwa izvo zvishoma zvavanoziva. Izvo zvakakwana kwavari kuti vadye ruvengo rwavo uye neupenzi hwavo husingakundike. Anenge hapana munhu anoda kushandisa maminetsi mashoma achinzwisisa meseji kana kubvunza kana zvainge zvisina kujeka kwavari.
Yemahara software idanho rakakura rekuti vanhu vanzwisise kuti chii rusununguko, chimwe chezvakawanda icho vanhu vanozvipa pachavo uye pamwe chakanyanya kubudirira, kunyangwe vasinganyatsonzwisisa mashandiro azvo. Asi zvinoitika kuti kubva paudiki ivo havatidzidzise kuti rusununguko rwedu runongowanikwa chero bedzi vamwe vachifarikanya rwavo. Saka mukuti isu tichaenderera mberi, tichimhanya nekuchimbidza kupedzisa imwe lap yedenderedzwa rimwe chetero.
Tiri kurarama munguva dzakaoma dzerusununguko rwekutaura. Iyo yekuparadzira muchina yatove kuita basa rayo, pakupedzisira ichiita kuti ivo vamwe vanhu vacheme kuti vabviswe rusununguko uye izwi ravo. Vanokumbira kuti vave varanda.
Pindura kuna daniel_OVen
uye aya ndiwo mafiro anoita rimwe bhurogu, achipindura pane izvo zvaisingabate
Kodzero yerusununguko rwekutaura haina muganho uye zvinopesana nehurumende chete, hazvimbopesana nevamwe vevamwe, kana kuti kana ini ikozvino mune imwecheteyo chirevo ndakazvipira kurwisa mhuri yako, kupomba kwako kuchadedera kuibvisa. kana kuidzikamisa?
Ngatione. Kuongorora chinhu chimwe, uye kuenzanisa ndechimwe chinhu.
Censoring inorambidza munhu kuti ataure mazano avo nemaonero. Kuenzanisa kunodzivirira kodzero dzevanhu kubva mukutyorwa, kusaremekedzwa, nezvimwe.
Kana iwe ukatuka mhuri yangu, uye ini ndiri maneja weakataura forum, blog, pasocial network, nezvimwe. Ini ndafunga kudzima zvakataurwa, ini handisi kuzokutsoropodza, ndinenge ndichiwongorora nekuti handibvise pfungwa kana pfungwa, ndinenge ndichidzima komendi iri isingaremekedze munhu kana vanhu vazhinji, uye nekudaro, inogona kukwana mukati iyo yakawandisa pfungwa yekutaura kweruvengo iyo yave fashoni mune vezvenhau. Kana, kune rumwe rutivi, ukataura pfungwa yako usingaremekedze chero munhu, uchiremekedza munhu wese, nezvimwe. Hazvingave zvakafanira kudzima yako yekutaura nekuti yaisazove kutaura kweruvengo. Kana ndikabvisa chirevo ichocho, zvino chingave chekudzivirira Chimwe chinhu ndechekuti gare gare ini handibvumire, mune iyo kesi ini ndaizopokana nharo dzako uye tobva tatanga gakava rekukurukura yataurwa musoro wenyaya.
Nenzira, ini ndiri mumwe weavo vanotsigira Linux Kupindwa muropa uye vapepeti varo kubva pakunyarara kwehusimbe hwangu husingaperi hunosanganiswa nenguva yangu shoma yemahara.
Mumamiriro api ezvinhu?
Kana mhuri yangu iine IBM uye ini ndikadzivirira sarudzo dzeRed Hat maererano neCentOS, handifanire kukutsoropodza
Pazera ramakore mashanu, vanhu vanotanga kunzwisisa kuti nyika haitsakatike pavanomira kuitarisa.
Zvinotaridza kuti handizvo zvese.
Yakanaka posvo chaizvo. Ndinokukorokotedza iwe Diego.
Vazhinji vanobvunza kuti iripi muganho? Ini ndinotenda kuti muganho uri murufu; Panongofa kufa kukatanga kuitika semhedzisiro yezvinhu zvisina basa pamanethiwo, zvinodikanwa kutanga kuvharira maakaundi.
ruben mansilla akadaro
Ini ndakagarawo munguva yeudzvanyiriri, uye ndinobvumirana newe kuti dzaive nguva dzekushushikana, dzinotyisa, dzisina hutano, dzakaipa, nguva dzekuponda nekushungurudzwa kwevanhu vasina mhaka, zvakatibhadharira vanhu vanopfuura makumi matatu kufa nekurwadziwa kukuru kwavo mhuri, kwandiri ndaka "tengeswa" iyo '30 Cup yeNyika, vara terevhizheni uye yeFalklands hondo ... asi ini ndakadzidza chimwe chinhu chisinei nepfungwa yako yekudzivirira ..., rusununguko rwekutaura harugone kukwana, se kumwe kutaura kunoti, Inofanirwa kuve yakagadzirirwa mukati mekuremekedza uye ichokwadi, chinangwa chayo chikuru chinofanira kunge chiri chakanaka, pane zvirevo, mifananidzo, mabasa, uye zvese zvinokodzera kuongororwa izvo zvinofanirwa kuve, mutemo wekuyera zvakanaka nezvakaipa itsika, uye hatimbofaniri kuve nehunhu, chinamato kana zvematongerwo enyika ... isu tiri kurarama munguva umo kusaenzana kuri kuwedzera kuwedzera, uko simba rekutenga, simba rekutaurirana, ruzivo rwakaiswa mukati mevanhu vashoma uye vashoma, ndosaka simba rekuongorora rinofanira e iva mumaoko emuzivi, ndinotenda kuti mhinduro yedambudziko iri ndeyekutarisa kune vanhu vakaenzana, vane hungwaru, uyezve nerunyararo uye hunoratidza nzanga.
Pindura ruben mansilla
Ini ndinobatana nekutaura kwaMauro, rusununguko rwekutaura runogara rwakaganhurwa, ndeyechokwadi chakabvumiranwa nemuridzi wechigadzirwa
Dai facebook yaive yangu, kana twitter kana chero pasocial network ndaizoita zvandiri kufadza nekuti chigadzirwa ndechemi, saka chinogona kuongororwa nekufunga kwevaridzi.
Panogona kuve neanodzivirira pano zvakare (izvo zvandinovimba kuti hapana)
Rusununguko rwechokwadi rwekutaura rwakaitika kuGirisi yekare kana muforamu yevaRoma apo munhu aitaura achiratidza chiso chake uye asingavanze kuseri kwenzvimbo yekutandarira isingazive kuti ndiani ari kuseri kwayo. Ndinovimba wawana zano
Kwaziso uye ndinopa akavimbika muverengi wenzvimbo ino
Mangwanani akanaka Diego, ndakanga ndisina kutora nguva yekuverenga chinyorwa chako kusvika maminetsi mashoma apfuura.
Ini ndinogona kutaura kuti ini handisati ndanyatsonzwisisa kunzwa kwekuti kusagutsikana kwavakakonzera kwakakonzera mauri, asi ini ndinogona kukuudza kuti haufanire kuti ubatwe nezvakataurwa.
Uye sekuziva kwako, kune mazwi evashandisi anotenda chaizvo uye, senge rimwe divi remari, iwe uchagamuchira makomenti kubva kune avo vevashandisi veTroll kana kubva kune avo vanoratidza hukuru kune mumwe maererano neruzivo.
Isa parutivi zvese zvaunoziva hazviuye kwauri, sezvawataura kuti iwe waibatwa se "misogynist, macho uye unonzwira tsitsi Vox" ... uyezve sezvandataura, hazvina kukodzera kubatwa, zviri nani tora divi rakanaka uye uone nzvimbo yemukana (zvirinani sekutaura kwedu kuno kuMexico).
Nekuti kwandiri zvaizove zviri nyore kwazvo kutanga gakava naani ini ndakataura pamusoro pezvidzidzo zvezvakaitika zvavaida kundidzidzisa, asi chokwadi kutambisa nguva nesimba (kunze kwekunge ndisina chekuita, pamwe ndaizo ndatora nguva), asi Zvakanaka, zvainge zvisina kudaro, ini ndakangosarudza kusapindura, kunyangwe pamwe ndakakanganisa uye zvaizongoonekwa nekuda kwedata rekuzvitora.
Uye zvakare nekundizungunusa, zvakanaka iyo saiti izere netrolls uye mafia isingabvumidze vashandisi kana matsva masayiti anoedza kupa chimwe chinhu kuti chikure uye ini ndinokuudza kuti sei ivo vachigara vachitaura pamusoro pezvinhu zvisina musoro.
Iyi ndiyo Internet.Kubvira riini iwe paunofanira kuverenga zvinyorwa usati wataura nezvazvo? Zvisinei, ndatenda nekuzviita.
Chinyorwa hachisi chikonzero nei chichiunza kushoropodzwa kwandiri semunyori, zvisina kunaka kana kwete.
Ini ndakazvinyora nekuti ndinonetsekana zvakanyanya nezve zvakasikwa kuti pane "yakanaka yekudzivirira" uye "yakaipa yekudzivirira"
Kuvharidzira hakuna kumbobvira kwakanaka nekuti ine zvinokuvadza zvemukati zvakafanana nezvinoita vampires. Inokura murima uye inoparadzwa kana iwe ukaiisa muchiedza chezuva.
Zvakare, hapana munhu anoenda kunouraya vanhu kana kuve nerusarura nekuti vakaverenga tweet kana bhuku kana nekuti mutambo wevhidhiyo kana bhaisikopo rinozviisa mumusoro wavo.
Uye hazvina kukodzera kukakavara nemamiriro uye mamiriro. Yenzvimbo yekudyidzana haisi nzvimbo yekudyira kana bhaisikopo, ndosaka isingakwanise kuvimba nekodzero yekubvumidzwa kunongedza chero munhu. Zvishoma kana zvichizivikanwa neruzhinji uye zvisingazivikanwe kuti hazvishande zvakafanana maitiro evadzvanyiriri seyevatungamiriri vakasarudzwa mukuzvitonga (tinoda ivo mapurezidhendi kana kwete).
Asi, chii chakaita kuti ndisvetuke plugs (kuArgentina isu zvakare tine zvirevo zvedu) ndezvekuti vakanyunyuta kuPablinux nekusaratidza pfungwa dzevakagadzira Dissenter. Vacharamba here kugamuchira mushonga weCoronavirus kana iye musiki akauraya vana vekatsi kuti vatore ropa ravo?
Uye iwe unofungei nezve Karl Popper Paradox yekutsungirira?
Bumbiro rezvematongerwo enyika rinojekesa ganhuriro kurusununguko rwekutaura uye ndiani ane mutoro wekumanikidza.
Ini hapana chandinopokana dai mutongi akaraira Twitter kumisa account yaTrump, uye aisazonyora chinyorwa (dai chaive nehukama hushoma neLinux) kana iyo North American Congress ichibvumira iyo Impeachment maitiro.
Ini handirambe mashandisiro emitemo yakagadzwa chiitiko chisati chaitika uye mune iro rakakuvara rine kodzero yekudzivirira.
Yangu yese rutsigiro kune vanyori veiyi blog. Ramba uchiratidzira zvinonzwika neiyi equanimity iyo isinga fanane neyakajairika mune zvese. Zvinoonekwa kuti pane kuyedza kutsvaga chokwadi uye kuti mhedzisiro yesimba iri dzimwe nguva inoenderana zvakanyanya nemafambiro erimwe divi; dzimwe nguva nemumwe munhu uye, pakupedzisira, dzimwe nguva zvinogutsa chero munhu zvakajairika.
Rusununguko rwekutaura rwakakosha kurusununguko rwevanhu nekuti hunokanganisa hutongi hwavo hwemukati. Kana zvichikwanisika kukotamisa hutongi hwemukati mevanhu, ivo vanozove vashandi veiye anotsikirira zvakanyanya. Ivo vanodzvinyirira vanogona kunge vari iyo GAFA nhasi, nezuro Trump kana Pablo Iglesias uye neBlack Lives Matter, uye mangwana ndiani anoziva.
Zvakawanda zvinogona kutaurwa nezve rusununguko rwekutaura, asi ini ndinongoti ipfungwa yepamutemo uye, nekudaro, iri pasi pemitemo yayo inoenda kupfuura kungonzwisisa kuri nyore kwetemu. Haasi munhu wese akadzidziswa kuti anzwisise kukura kwayo, zvazvinoreva uye kudyidzana kwayo nedzimwe kodzero. Zvakanaka kuva nemaonero ako, asi kushoropodzwa kwakawanda kwandinoverenga pamusoro pekukanganisa - kwemakambani, chenjera - rusununguko rwekutaura haruna kana kuenzanisa zvavari kutaura nezvazvo. Ivo vanotenda kuti ipfungwa yakapusa uye chokwadi uye ndozvazvakaitawo maonero ehukama, apo, kune rumwe rutivi, chiri chinhu chakaomarara chinoda kuongororwa neakawanda mapoinzi akabatanidzwa.
Mazhinji mafungidziro acho kungoita kuzvidzora kwekuda-kurerutsa kana kurerutsa kunotora zvese kuchikamu. Ndokunge, kusarura kwekuziva uko kunotaura zvishoma nezve chero anopindira nenzira iyi
Iwe une rutsigiro ruzere, usambofa wakasiya zvaunofunga. Sezvineiwo, avo vanogunun'una pamusoro pemashoko eruvengo ndivo chaizvo vanogovera mameseji eruvengo. Kunyatsodemba uye kusaruramisa nhamo isingafadzi yekudzvinyirirwa kwakaitwa netekinoroji huru, zvese kunaTrump uye kune chero asiri kuruboshwe zvakanyanya. Uye chinzvimbo chaMozilla chinosuruvarisa, chimwe chinhu chinondishamisa chaizvo sezvo munhu angafunga kuti zvingave zvakapesana. Ini pachangu ndinosiya Firefox, handina basa nehumambo, kana ndichifanira kushandisa Chronium browser ipapo ndichaishandisa, dambudziko richava kusarudza browser ripi. Handizive kana akashinga akavimbika kana Vivaldi. Parizvino ini ndinofunga kuti yakavimbika inogona kunge iri browser reGab iro rakavakirwa paShinga,
Iwe une rutsigiro ruzere, ramba wakadaro.
Mumwe munhu akataura, achitaura nezvekusvika kwefascism muUSA: "VaFascist vemangwana vanozozvidaidza vanopokana-fascists." Uye uchichengeta izvo mundangariro uye nekuzviisa pasirese, unogona kutsanangura zvinhu zvakawanda zvinoitika.
Ndakagara muhudzvanyiriri uye ndakazvitambura ini pachangu. Uye nguva dzino dzatiri kurarama dzakada kufanana neidzo. Kune avo vakafira mumisasa yevasungwa kana gulags, ivo havana hanya nekuti mhondi yavo yainzi José kana Adolfo. Dzose dzaive mhondi.
Saka zviri nyore pane shamwari yangu. Vazhinji veavo vanokutsoropodza nhasi vanozove vanobatwa mune ramangwana rezvavanozvidzivirira izvozvi… asi hapazove neanosara anovabatsira. Ramba uchidzivirira uye kutendeka kumisimboti yako uye usaite tsika yeMarxist "... uye kana usingavafarire, ndine vamwe."
Ndinogona kana kusabvumirana nezvaunotaura asi ini ndaizodzivirira nehupenyu hwangu kodzero yako yekuzvitaura.
"Vakandibata semusikana asingadi mukadzi, murume uye anonzwira tsitsi Vox"
Pamwe zvaive nekuda kwemhando idzi dzekutaura
"Cherekedzai kuti Mai Baker havataure chero chinhu nezvevatema matema vachidaidzira kudzvanyirira varungu kana meseji inovenga kubva kuvakadzi vanofunga kuti murume wese anoita bonde chibharo."
Ivo ndeavo vanosarurana, misogynists uye Vox vanonzwira tsitsi vanoshandisa kuSpain.
Pa Twitter Spain (ini handizive mune mamwe matunhu epasi), sooooo maakaundi mazhinji anomiswa mwedzi wega. Uye yeavo vandinoziva, vateveri vazhinji, "vakasara" (zvakare "varuboshwe-mapapiro rappers"), anarchists ... kupfuura rusaruro, misogynists uye vane simba. Ichokwadi kuti yangu TL inokanganisa, hongu.
Zvamunotaura hazvisi zvechokwadi. Ivo vachangobva kumisa mupirisiti-kurudyi mupristi (ini handinamate, uye handina kumutevera) yekutumira tweet "Paunenge uri baba, iwe uchadya mazai." Vakatora mukana wechiSpanish chirevo chekupfura mupristi "anotonhorera" chinokwezva vechidiki vazhinji, nekuti chiKristu parizvino chinofanirwa kutambudzwa uye zvimwe zvitendero kwete (ndinodzokorora, handisi wechitendero). Muchokwadi, YouTube yakamisa chiteshi chepamhepo apo mupristi mumwe chete aisiya achitsanangura zvaiitika. Uye kwete, ini ndanga ndisiri kuteedzera chiteshi futi, asi paTwitter zvinhu zvakapararira uye ini ndakazoziva. "Censored Pater" inonzwika kujairika kwauri here? Yaive TT kuSpain.
Nezve dheti rako, rwiyo rwakati "mubati chibharo ndiwe" rave riri pasi rose "rova", zvekuti kutaura kuti "murume wese anhurume nemurume chibharo" ichokwadi. Muchokwadi, kune vamwe vakadzi vakakosha vanozvitaura mukutaura kwavo, asi wedzera izvo "zvinogona" kumberi kuitira zvingangoitika; zvikasadaro inenge iri mhosva.
Kuti zvaanotaura zvinotaurwa zvakare nebato rausingade hazvireve kuti manyepo uye hazviite kuti munhu ave muvhoti webato iri. Uye huya, dambudziko maererano neizvozvo 1- anotsoropodza mukadzi (maziso), 2- anokumbira kuti zviito zvechisimba zvevose zvitukwe (rusaruraganda), 3- Anotsamwiswa nezvakadai senziyo uye zvinyorwa zvinomunongedzera kunze semunhu anogona kubata chibharo (misogynist). Zvakanaka, zvakanaka: ngatiregei kushoropodza vanhukadzi, ngatiregei kungopomera dzimwe mhosva uye pavanotitaurira kuti tiri vabati chibharo, tinozvigamuchira tichinyemwerera. Zvese zvakagadziriswa, tinopinda zvakanyanya uye nyika ichave iri nani ... kana kwete.